Nagarik News - चन्द्रागिरिमा केबलकार सरर‍‍‍‍‍...(भिडियो)
तर थानकोटकै दक्षिण–पश्चिममा अवस्थित एक कुनोको वास्तविकता फरक देखिन्छ। धुलो, हिलो र धुँवा छोडेर २० मिनेट पैदल वा ३ मिनेट सवारी साधन कुदाएपछि केबल कारको ग्वान्डाला(डब्बा)सँगै एउटा बृहत् परियोजना देखिनेछ। त्यतिबेला तपाइँले भन्नुहुनेछ, 'वाउ!'
त्रिभुवन पार्कको पश्चिम—दक्षिण कुनो नजिकै चन्द्रागिरि चुचुरो पुग्न काडमाडौं फन पार्क लिमिटेडले निर्माण गरिरहेको केबलकार बहुउद्देश्यीय पर्यटन परियोजना नजिक पुग्नेको मुखबाट सुन्न पाइन्छ, 'नेपालमै यस्तो ?' हो, चन्द्रागिरि चुचुरो पुगेर विशाल काठमाडौं उपत्यका नियालेपछि हामीलाई पनि लाग्यो, 'गर्न सक्दा नेपाललाई स्विटजरल्याण्ड जस्तै बनाउन सकिने रहेछ।'
चन्द्रागिरि त्यही पहाड हो जहाँबाट पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौं उपत्यका हेर्दा मोहित भएर आफ्नो बनाउन रणनीति बनाएका थिए। यो त्यही पहाड हो जहाँ रक्सौलको बाटो हुँदै तीन दिन पैदल हिँडेर आएका न्युयोर्क टाइम्सका पत्रकार जोन ट्रोनबुल बास बसेका थिए। अमेरिका फर्केपछि सन् १९४० को दशकमा उनले लेखे, 'चन्द्रागिरीको चुचुरोबाट देखिने साधु उपत्यका र साङ्ग्रिला हेर्दा जुकाको टोकाइ र तीन दिनको पैदल हिँडाइको थकाइ सबै मेटिने रहेछ।'
चन्द्रागिरि डाँडाबारे धार्मिक विषय र किंवदन्तीहरु पनि प्रशस्तै जोडिएका छन्। शिवले सतीदेवीको शव बोकेर पृथ्वी भ्रमण गर्दा चन्द्रागिरिमा निधार पतन भएको वर्णन स्वस्थानी कथामा छ। निधारलाई संस्कृतमा 'भाल' भनिने कारण उक्त स्थानमा भालेश्वर महादेव उत्पत्ति भएको व्याख्या छ। धार्मिक आस्थालाई अक्षुण्ण राख्न फन पार्क लिमिटेडले चन्द्रागिरी परियोजनाअन्तर्गत विशाल र सुन्दर भालेश्व महादेव मन्दिर स्थापना गरेको छ। त्यहाँ पहिलैदेखि स्थानीयले पूजा गर्दै आएका शिवका प्रतिमाहरुलाई जोगाएर स्थापित गरिएका छन्।
कम्पनीका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल निर्माण कम्पनीले केबलकारको सबै काम पूरा गरेर हस्तान्तरण गरिसकेको बताउँछन्। 'पटकपटकको परीक्षणमा सफल भएपछि निर्माण कम्पनीले हामीलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ,' ढकालले नागरिकन्युजसँग भने, 'सबै उपकरणहरु अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका ल्याएका छौं। हामीलाई अष्ट्रियाको कम्पनीले उपकरण आपूर्ति गरेको हो।' रेस्टुरेन्टलगायत अन्य निर्माण कार्य नसकिँदा केवलकार सञ्चालनमा आउन ढिलाइ भइरहेको छ। अर्को महिनासम्ममा केवलकार सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य सहित तयारी भइरहेको अध्यक्ष ढकालले जानकारी दिए।
केबलकारमा यात्रुको सुरक्षाका लागि टावर र डब्बाको निगरानी कम्प्युटर जडित प्रविधिबाट गरिनेछ। केबलकारको अहिलेसम्मको नयाँ संस्करण भएकाले त्यसलाई कम्प्युटराइज्ड गर्न सहज भएको कम्पनीको दाबी छ। 'यात्रुको सुरक्षालाई ध्यान दिँदै हामीले उच्च प्रविधि जडान गरेका छौं। यात्रुको सुरक्षालाई हामीले सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं', कम्पनीका सेल्स एन्ड मार्केटिङ म्यानेजर विख्यात विक्रम राणाले नागरिकन्युजसँग भने।
'यो पारिवारसहित घुम्ने, रमाउने र रिफ्रेसमेन्ट हुने टुरिजम डेस्टिनेशन हुनेछ,' राणाले भने, 'एउटा परिबार यहाँ केबलकार चढेर बिहान आएपछि बेलुकैसम्म मनोरञ्जनपूर्वक समय बिताउन सकुन् भन्ने हाम्रो प्रायास छ, अझ रात बिताउन चाहनेहरुका लागि हामीले रिसोर्ट निर्माण गर्दैछौं।'
'हामीले रचना गरेको नयाँ गन्तव्यमा रमाइसकेपछि सेवाको तुलनामा सस्तै पर्ने भाडादर हामी निर्धारण गर्नेछौं,' निर्देशक पौडेलले भने, 'केबलकार नयाँ प्रविधि सहितको पछिल्लो परिमार्जित संस्करणको हो, अन्य पूर्वाधारहरु पनि उत्तिकै सशक्त छन्। सेवाग्राहीले अनुभव गरेपछि यी कुरा आफैँ थाहा पाउनु हुनेछ।' चन्द्रागिरि चुचुरो पुगेर फर्किन दुईतर्फी भाडा दर करिब ७ सय रुपैयाँ हाराहारी हुने अनुमान कम्पनीको छ।